Windows 10, 8 မြန်မာယူနီကုဒ် သုံးစွဲနည်း စ/ဆုံး – Myanmar Unicode® Migration
2 နိုဝင်ဘာ 2017
ဖုန်းမှာဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျူတာမှာ ဖြစ်ဖြစ် ယူနီကုဒ်သုံးဖို့ဆိုရင် ဖောင့် နှင့် ကီးလက်ကွက် ရှိရင်သုံးလို့ရပါပြီ။ ကျန်တာတော့ စာရိုက်နည်း သိရင်ဖြစ်ပါတယ်။ Windows 10, 8, 8.1 တို့မှာဆိုရင် ဖောင့်နှင့်ကီးလက်ကွက် ပါပြီးသားမို့လို့ လက်တင်သုံးလို့ရပါတယ်။
Myanmar Text ဆိုတဲ့ဖောင့်
Windows တင်ကတည်းက မြန်မာစာယူနီကုဒ်စနစ် ပါလာပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဖောင့်အမည်က Myanmar Text ဖြစ်ပြီး မြန်မာ(ဗမာ) အပါအဝင် ပါဠိ၊ သက္ကတ ကစလို့ မွန်၊ ရှမ်း၊ ကရင် နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား စာတွေပါ အထောက်အပံ့ပေးထားပါတယ်။ ကီးလက်ကွက်ကိုတော့ task bar ပေါ်ရောက်အောင် ဖွင့်ပြီးမှ သုံးစွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Windows မှာပါတဲ့ ကီးလက်ကွက်ကို ဖွင့်နည်း
Start menu > Setting > Time & Language ကိုရွေးပါ။
ဘယ်ဘက်ကော်လံမှ Region & language ကိုရွေးပါ။
Addalanguage ကိုနှိပ်ပါ language အမည်ကို ရိုက်သွင်း၍ ရှာရန် “ my” သို့မဟုတ် “ bur” ဟုရိုက်ထည့်ကြည့်ပါက Burmese ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Burmese ကိုရွေး၍ Next > Install ဆက်နှိပ်ပါ။
System task bar ပေါ်တွင် မြန်မာလက်ကွက်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
Windows 10 update ရပြီးသောစက်များတွင် Keyboard ၂ခုပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ သဝေထိုးအရင်ရိုက်နိုင်သော ( Myanmar (Visual Order) Keyboard ကို default ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး Option > add keyboard ကတဆင့် Myanmar (Phonetic Order) Keyboard ကိုထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
မည်သည့် Word Processing, Text Editor မှာမဆို လက်ကွက်ရွေး ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် ကနေ မြန်မာ၊ မြန်မာ ကနေ အင်္ဂလိပ် အပြန်အလှန် ပြောင်းချင်ရင်တော့ Windows logo key + Space ၂ခုတွဲနှိပ်ပြီး ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ( Ctrl + Shift ကီးတွဲနှိပ်တာနဲ့ သဘော အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ )
ဒီနေရာမှာ တစ်ခု သတိထားရမှာက သုံးစွဲသူထံမှာ ဇော်ဂျီလက်ကွက် ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် Ctrl + Shift တစ်ခါနှိပ်ရင် လက်ကွက် တစ်ခုပြောင်းသွားတယ် မဟုတ်လား? လက်ကွက် ၂−ခုတည်းရှိတုန်းက အင်္ဂလိပ် နှင့် ဇော်ဂျီ(မြန်မာ) က တလှည့်စီ ပြောင်းနေမှာ ဖြစ်ပေမယ့် နောက်ထပ် ယူနီကုဒ် လက်ကွက်တစ်ခု ထပ်ထည့်လိုက်ရင် လက်ကွက် ၃−ခု ဖြစ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အင်္ဂလိပ် − ဇော်ဂျီ − ယူနီကုဒ် ဆိုပြီး ၃−ခု ရှိလာပြီဖြစ်လို့ ပထမ လက်ကွက်က အင်္ဂလိပ် ဆိုရင် Ctrl + Shift တခါနှိပ်ရင် ဇော်ဂျီ ပြောင်းမယ်၊ နောက်တခါနှိပ်ရင် ယူနီကုဒ် ပြောင်းမယ်၊ နောက်တခါ နှိပ်မှ အင်္ဂလိပ် ပြန်ရောက်မှာပါ။ လက်ကွက် ၃−ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက် တခါပိုနှိပ်ရမှာ။
ဇော်ဂျီ လက်ကွက်ကြီးနဲ့ ယူနီကုဒ်ဖောင့်ကို ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲရင် တလွဲတွေထွက်နေမှာဖြစ်သလို ယူနီကုဒ် လက်ကွက်ကြီးနဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ရွေးပြီး ရိုက်နှိပ်နေရင်လည်း တလွဲတွေ ထွက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ လက်ကွက်နဲ့ ဖောင့်ကို ရွေးပြီးစာရိုက်မှ မှန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။လက်ကွက်ပြောင်းရာမှာ Win Logo + Space ကီးမသုံးချင်ဘူး Ctrl + Shift ကီးပဲ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Setting ပြန်ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်။
Windows Native ကီးလက်ကွက် မသုံးချင်ဘူး။ သဝေထိုးကို နောက်ကရိုက်ရတာမကြိုက်ဘူး ရှေ့မှာအရင်ရိုက်ချင်တယ်၊ သဝေထိုးကို အမြင်အတိုင်းရိုက်ချင်တယ် ဆိုရင် Smart Keyboard ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Smart Keyboard ဆိုတာကတော့ သဝေထိုးကို ရှေ့ကထားရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတယ်။ ဒါအပြင် အပေါ်အောက် သရတွဲများ အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုရိုက်ရိုက် အမှန်အဖြစ် ပြန်တည့်မှတ်ပေးတယ်။ သုံးစွဲသူရဲ့ စာရိုက်အစီအစဉ်တွေကို Normalize လုပ်ပေးတဲ့ Keyboard အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Smart Keyboard တွေက တော့ Keymagic2နှင့် Keyman 10 ကီးဘုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Windows 10, 8 တွေအတွက် ဒီ Smart Keyboard ၂−ခုထဲကပဲ သုံးစွဲဖို့ ထောက်ခံပါတယ်။
Keymagic Version 2
Windows Vista ကနေ Windows 10 ထိ (32 bit 64 bit) ပါသုံးလို့ရတယ်လို့ သူ့ဝက်ဆိုက်မှာ ဆိုထားပါတယ်။ လက်ကွက် အမျိုးအစား ၅ မျိုး တပါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားပြီး နောက်ထပ် နောက်ထပ် စိတ်ကြိုက်လက်ကွက်များကို လည်းထည့်သွင်း သုံးစွဲလို့ ရပါတယ်။ အသုံးမလိုတဲ့ လက်ကွက်ရှိပါကလည်း ဖြုတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ လက်ကွက်ဇယားကို On-Screen လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ Mac, Linux အတွက်လည်းထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ OpenSource project ဖြစ်ပါတယ်။
Keymagic ထည့်သွင်းတာက အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ဘာမှ အထွေအထူးလုပ်ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ Next, Ok လောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ Successfully ပြရင် အမှန်ချက်လေးတွေ လုပ်ပေးရပါမယ်။
မှတ်ချက်။ အရင်က Keymagic version အဟောင်းဖြစ်ဖြစ် သွင်းထားပြီးသားရှိနေပါက အကုန် ကုန်စင်အောင် ဖြုတ်ပြီးမှ ထပ်သွင်းရပါမယ်။ လက်ကွက်အဟောင်း ရှိနေရင် ထပ်သွင်းပါက error တက်တတ်ပါတယ်။
Keymagic သွင်းပြီးလို့ ဖွင့်ကြည့် လိုက်ရင် လက်ကွက် ၅ မျိုးတပါတည်း ထည့်ပေးထားတာ တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁. ဇော်ကုတ်, ၂. ဇော်ဂျီ, ၃. မြန်စံ, ၄. my-Win, ၅. Pyidaungsu MM တို့ဖြစ်ပါတယ်။
၁. ဇော်ကုတ် ကတော့ “ယူနီကုဒ်ကို ဇော်ဂျီလို ရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးလို့ မရဘူးလား?” ဆိုတဲ့ သုံးစွဲသူများ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီလိုပဲ ရိုက်ချင်ရင် “ဇော်ကုတ်” လက်ကွက်ကို ရွေးသုံးပါ။
၂. ဇော်ဂျီ ကတော့ Ctrl + Shift နှိပ်နေရတဲ့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်ကို ဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်။ ဇော်ဂျီစာကို ရိုက်ဖို့ ကီးမက်ဂျက်မှာပါ ထပ်ထည့်ထားပေးတဲ့ ဇော်ဂျီလက်ကွက် ဖြစ်ပါတယ်။
၃. မြန်စံ ကတော့ Myanmar3 လက်ကွက်လိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
၄. My-Win ကတော့ ဝင်းလက်ကွက်သမားများ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
၅. Pyidaungsu MM ကတော့ Myanmar3လက်ကွက် ကိုထပ်ပွားပြီး ဂဏန်း သုည နှင့် ဝလုံး၊ ရကောက် နှင့် ခုနစ်၊ ၎င်း ကို လေး စသည့် အသုံးမှား နိုင်တာမျိုး အတွက် ပြင်ပေးတဲ့ လက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ၅ မျိုးထဲကမှ အသုံးမလိုဘူးသေချာရင် ဖြုတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Select လုပ်ပြီး Remove လုပ်ရုံပါပဲ။ အခြားတိုင်းရင်းသား လက်ကွက်တွေ ထည့်ချင်သေးလား Add နှိပ်ပြီးထည့်လိုက်။ တိုင်းရင်းသားလက်ကွက်တွေနှင့် အခြားလက်ကွက်တွေရဲ့ လင့်ကို
အင်္ဂလိပ် ကနေ မြန်မာ၊ မြန်မာကနေ အင်္ဂလိပ် အဖြစ် Ctrl+Shift နှိပ်ပြီး ပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်။ ၅မျိုးထဲက တခုခု ရွေးချင်ရင် R-Click သို့မဟုတ် Ctrl+Space နှိပ်ပြီးရွေးနိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာ တခုခု ရှိရင် အဲဒီမှာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Keyman Desktop 10 ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်း Keymagic လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သဝေထိုးအရင်ရိုက်လို့ရတယ်။ သရတွဲများ အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုရိုက်ရိုက် အမှန်အဖြစ် ပြန်တည့်မတ်ပေးတယ်။ Myanmar2 နဲ့ အတူထွက်ခဲ့တဲ့ Keyman6ကိုမသုံးသင့်တော့ပါဘူး။ ဒီဗားရှင်းက Windows 10, 8 တို့နဲ့ပိုမိုသင့်တော်ပါတယ်။ Internet Explorer IE version9နှင့် အထက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
Download Keyman Desktop
ညွှန်ကြားချက်များ အတိုင်း Next, Ok နှိပ်ပေးရုံပါပဲ။ အသေးစိတ် ဆက်လက်ကြည့်ရှု့ရန်
အားလုံးထည့်သွင်းပြီးရင်တော့ Keyman စတင်ဖို့ပြတဲ့အခါမှာ Start Keyman နှိပ်ရင် task bar မှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ task bar ပေါ်က Keyman ကို Click ထောက်ကြည့်ရင် လက်ကွက် ၃ မျိုး ထည့်သွင်းထားတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
– myWin နှင့် myWinExt လက်ကွက်များဟာ Win Font လက်ကွက်များအတိုင်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
– Myanmar3 SIL လက်ကွက်ကတော့ Myanmar3 လက်ကွက်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလက်ကွက် သုံးမျိုးစလုံးဟာ မည်သည့် ယူနီကုဒ်ဖောင့်ကိုမဆို ရိုက်နှိပ်သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Pyidaungsu MM လက်ကွက်ကိုအောက်ပါလင့်တွင်ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ။
ရယူထားသော Pyidaungsu MM.kmx ဖိုင်ကိုမည့်သည်ဖိုင်တွင်သိမ်းထားသည်ဆိုတာကို မှတ်ထားပါ။
Keyman ကိုဖွင့်ပြီး Add ကိုနှိပ်ပါ။ပြီးရင်ခုနကတတုန်းက Pyidaungsu MM.kmx သိမ်းထားသည့်ဖိုင်ကိုသွားပြီး
Pyidaungsu MM.kmx ကိုရွေးချယ်၍ Open ကိုနှိပ်ပါ။ဒီလိုဆိုPyidaungsu MM လက်ကွက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
လက်ကွက်သုံးမျိုးစလုံးရဲ့ ဘေးကပြထားတဲ့ကီးတွေက Short-cut တွေဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar3std လက်ကွက်ဘေးက Shift+Ctrl+S ဆိုတာ ၎င်းအတွက် short-cut ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ short-cut နဲ အင်္ဂလိပ် နှင့် မြန်မာကို အပြန်အလှန် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Win+Space short-cut နဲ့လည်းရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (Windows လက်ကွက် ဇယားထဲကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။)
task bar ပေါ်က Keyman ကို click ထောက်ပြီး Configuration ကတဆင့် လက်ကွက်၃မျိုးကို လိုသလိုစီမံနိုင်ပါတယ်။
မလိုချင်တာ အမှန်ချက်ဖြုတ်နိုင် ပါတယ် download လုပ်ထားတဲ့ kmx လက်ကွက်တွေကို Install Keyboard ကတဆင့် ထည့်နိုင်သလို Download keyboard နှိပ်ပြီး online က လက်ကွက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Myanmar3 SIL ဘေးက မီးခိုးရောင် ? နှိပ်ပြီး Myanmar3 SIL User Instructions(Myanmar) ကိုနှိပ်ကြည့်ပါက လက်ကွက်ဇယားနှင့်တကွ စာရိုက်နည်း အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြသားထားတာ တွေ့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစာရိုက်နည်းများ အတိုင်း မည်သည့်ယူနီကုဒ်ဖောင့်ကိုမဆို ရိုက်နှိပ်နိင်ပါတယ်။
Myanmar3 SIL ရွေးပြီး Shift+Alt+K သို့မဟုတ် OnScreen Keyboard ကိုရွေးနှိပ်ပါက On Screen လက်ကွက်ဇယားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ဒီ Smart Keyboard ၂−မျိုးစလုံးက Excel 2013 မှာပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ Excel 2016 မှာ အဆင်မပြေသေးပါဘူး။
Windows 10 မှာပါတဲ့ Myanmar Text ဖောင့်အပြင် အခြားသော ယူနီကုဒ်ဖောင့်အများအပြားကိုလည်း နှစ်သက်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ− Google ရဲ့ Noto Sans Myanmar ဖောင့်များ၊ SIL ရဲ့ Padauk ဖောင်နှင့် အခြားသော ပညာရှင်များနှင့် အသင်းအဖွဲ့များက ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖောင့် အများအပြား ၆၀ ခန့်လည်းရှိပါသေးတယ်။ CherryUnicode, MasterpieceUniSans, MyMyanmarUniversal, PangLon, Parabaik, TharLon, Yunghkio, Myanmar3, Pyidaungsu font တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရရုံးတွေမှာ အသုံးများနေတဲ့ Office 2016 နှင့် အဆင်မပြေတာတွေ့ရပါတယ်။ Myanmar3 ကို Office word 2016 တွင်သုံးစွဲမယ်ဆိုပါက Myanmar3-2018.ttf ဖောင့်ကိုပြောင်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်က ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိတဲ့ “Pyidaungsu” ဖောင့်ကို Windows 10 မှာ Office 2013, 2016 ဖြင့် တွဲဘက်သုံးစွဲနိုင်အောင် အထူးပြုလုပ်ထားပါတယ်။ Version နံပါတ် ၂မျိုးထုတ်လုပ်ထားပြီး Regular နှင့် Bold ၂မျိုးစီပါဝင်ပါတယ်။
Windows7အတွက်
Pyidaungsu Font Download ယူရန်
ယူနီကုဒ် ဖောင့်သွင်းနည်း ဆက်လက်ကြည့်ရှု့ရန်
Excel နှင့် မြန်မာကိန်းဂဏန်းများ
ကိန်းဂဏန်းပုံစံ၊ ငွေကြေးပုံစံ၊ ရက်စွဲပုံစံအမျိုးမျိုး တို့ကို တွက်ချက်မှုလုပ်မယ်။ function, formula တွေနဲ့ အသုံးချမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Font, Keyboard, Useful
One thought on “Windows 10, 8 မြန်မာယူနီကုဒ် သုံးစွဲနည်း စ/ဆုံး”
Pingback: Unicode Today – Unicode Technical Support | Myanmar